आफूखुसी औषधि खानुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहोस् ज्यानै जान सक्छ ! | OB Media
आवर बिराटनगर डटनेट | २१ पुष २०७६, सोमबार ०८:०२
काठमाण्डाै - अहिले मौसम चिसो छ । यसैपनि रुघाखोकी लाग्ने, घाँटी खसखस हुने जस्ता समस्या देखिन्छन् । त्यसमाथि काठमाण्डौमा त धुलो धुँवाको वातावरण समेत दुषित छ । दुषित वातावरणमा एलर्जीले उत्तिकै सताउने गर्छ ।
सामान्य रुघाखोकी लाग्दा, ज्वरो आउँदा, टाउको तथा घाँटी दुख्दा आफूखुसी औषधि किन्ने र खाने चलन छ । तर, बिनाजाँच औषधि बेच्ने र खाने गर्दा त्यसको असर कस्तो हुन्छ भन्ने धेरैलाई हेक्का नै छैन् ।
अस्पताल पुग्ने र डाक्टर खोज्ने झण्झट टार्नकै लागि पनि सोझै पसलबाट औषधि किन्ने र खाने बानी भने राम्रो हैन । यसबाट स्वास्थ्यमा थप जटिल समस्या निम्त्याउने भएकाले जथाभावी औषधि नखान डाक्टरहरुको सल्लाह छ ।
आफूखुसी औषधिको प्रयोगले थप जटिल समस्याका साथै रोग सार्ने किटाणुको प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढ्ने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेककुमार लाल बताउनुहुन्छ ।
जथाभावी एन्टिबायोटिक औषधि खाँदा पछि रोग सजिलै निको नहुने समस्या निम्तने भएकाले सामान्य अवस्थाका बिरामीले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
दुर्गममा अस्पताल र विशेषज्ञ सेवाको अभाव छ । सुगममा डाक्टर र सेवा हुँदाहुँदै पनि जाँच गरी औषधि लिने सम्मको फुर्सद छैन । छिटो र सजिलो खोजेर सामान्य रोगका बिरामीले आफ्नो स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने गरेका छन् ।
धुलोधुवाँ छेक्ने मास्क प्रयोग गर्दा पनि सामान्य समस्याबाट जोगिन सकिन्छ । तर जोगिने भन्दा पनि संक्रमण भैसकेपछि औषधि लिन अस्पताल पुग्ने चलन नै बढी देखिने गरेको वीर अस्पतालका डाक्टर अनिता जिसीको भनाई छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘रुघाखोकी, घाँटी दुख्ने जस्ता सामान्य समस्यामा डाक्टरको सल्लाह नलिइ आफूखुसी औषधि खाने हो भने रोग निको हुनेभन्दा पनि थप बल्झन्छ ।’
आफूखुसी औषधि खानेहरुले जानुपर्ने कुरा :
– जथाभावी औषधिको प्रयोग गर्दा किटाणु बलियो बन्दै जान्छ । शरीरमा औषधिको प्रभाव कमजोर बन्छ ।
– जटिल रोगमा एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन ।
– कान, मृगौला जस्ता महत्वपूर्ण अंगमा बढी असर गर्छ ।
– भावी पुस्तामा समेत असर देखिने खतरा हुन्छ ।
अनुमानका भरमा खाएको औषधिले सामान्य अवस्था पनि जटिल बन्न सक्छ । अनि ज्यानै पनि जान सक्ने भएकाले डाक्टरको सल्लाहअनुसार मात्र औषधि खान महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेककुमार लालको सुझाव छ ।
एक सय २२ चिनियाँ नागरिकलाई अब अध्यागमन कानुन अनुसार कारवाही, देश निकालाको तयारी
अमेरिका र इरानबीचको तनावले खाडीमा रहेका नेपालीबारे चिन्ता, सरकार नै अन्योलमा